रुकुमलाई समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो – घर्ती « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
रुकुमलाई समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो – घर्ती
४ मंसिर २०७४, सोमबार १६:०७ मा प्रकाशित
प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार, पूर्वीरुकुम– २ एवं नेकपा माओवादी केन्द्र. सचिवालय सदस्य तथा ५ नं.प्रदेश संयोजक पूर्णबहादुर घर्ती संगको कुराकानी गदै गणेश वली
पूर्वी रुकुम निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा तपाईको उम्मेदवारी किन ? यो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य उम्मेदवारहरु पनि हुनुहुन्छ । मतदाताले तपाईलाई नै मत किन दिने ?
यो नेपालकै कान्छो जिल्ला हो । रुकुम टुक्रियो र पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम बन्यो यसले दुवै जिल्लाको सम्भावना उजागर गर्ने मौका प्राप्त गर्नुका साथै विकास र समृद्धिको ढोका समेत खोलेको छ । त्यति मात्र हैन प्रशानिक कार्यका लागि दुवै जिल्लालाई सहज र सरल बनाएको छ ।
पूर्वीरुकुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो प्रकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न जिल्ला छ । यहाँको जडिबुटी, जलश्रोत र कृषिलाई हामीले आधुनिकिकरण औद्योगिकरण र बजारीकरण गर्न सक्याँै र पर्यटनको विकास तथा प्रचार गरे मात्र यहाँको जनताको घरघरमा समृद्धि र गाउँगाउँमा विकास दिन सक्छाँै । त्यसैको नेतृत्व गर्न र यहि जिम्मेवारी वहन गर्न मैले यो क्षेत्रवाट उम्मेद्वारी दिएको छु ।
पार्टीको जिम्मेवारीका कारण मैले यहिलेसम्म जनप्रतिनिधीको रुपमा काम गरिन तर अव देश राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्वी रुकुमलाई समृद्ध बनाउन यहाँका मतदाताले मलाई मतदान गरि सहयोग गर्ने मेरो अपेक्षा, आशा र भरोसा छ ।
विकास निर्माण सम्बन्धि तपाईका एजेन्डा के हुन ?
राजनीतिक आन्दोलन सकियो अवको काम भनेकै विकास निर्माण को हो । पहिलो कुरा म नेताहरु जितेर जाने र फर्केर आउँदैनन् भन्ने जनताको गुनासोको अन्त्य गर्छु र सधैँ जनताको विचमा रहेर जनतासँगै सल्लाह गरेर सवै विकास निर्माणको काम गर्छु । दोश्रो कुरा सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगाएतका समस्या छन । जनप्रतिनिधी भएका हैसियतले मैले यीनै विकास निर्माणका काम गर्ने छु ।
अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भनिएको तालमेलको उद्देश्य के हो रु अहिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको सहमति वामगठबन्धन निर्माण गरि आगामी संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्दै एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने र देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हो ।
विभिन्न जनपक्षीय आन्दोलन, जनसंघर्ष, जनयुद्ध जस्ता जनमुक्ति आन्दोलनका कारण देशमा गणतन्त्र आएको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान जारी भएको छ । त्यो संविधानमै हामीले समाजवादउन्मुख दिशातर्फ जाने भनेर उल्लेख गरेका छौं ।
राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा कम्युनिष्टहरुले नै नेतृत्व गरे । छुट्टा छुट्टै भएर गर्दा पनि यति ठूला परिवर्तन भए भने सँगै बसेर काम गर्दा झन धेरे अगाडि बढ्न सकिन्छ । फेरि समाजवादमा पुग्ने महान लक्ष्य लिएर अघि बढेपछि अनि दुई दलको एउटै बाटो भएपछि एउटै पार्टीमा रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वले सोचेको हो । समाजवादमा जानको लागि संगठनात्मक संरचना पनि बलियो हुन जरुरी छ । यसकारण वामपन्थीहरुको एउटा स्थिर सरकार निर्माण गर्ने तत्कालिक लक्ष्यका साथ वामपन्थी गठबन्धन गरिएको छ र सकेसम्म एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गरिन्छ र त्यति नभए पनि दुई पार्टी विच एकीकरण भने अवश्य हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि अब हामी एक्ला–एक्लै भएर अघि बढ्न सक्दैनौं । यो कुनै स्वार्थ नभएर एजेण्डाको आधारमा एकता भएको छ ।
कार्यकर्ताहरुसँग छलफल नगरिकनै गरिएको पार्टी एकताले कार्यकर्ता पंक्तिमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
पार्टी एकता कशैको मनोगत चाहनाले हुने हैन । नेतााले मात्र चाहेर मात्र हुँदैन् । यसो हुने भए त २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी किन विभाजित र टुक्राटुक्र हुन्थे रु एमालेले पनि टुटफुट विभाजनको दुखद अवस्था व्यहोर्दै एकीकृत हुँदै आयो । माओवादी पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएर एकीकृत बन्यो । त्यो भन्दा ठूलो जनताले सवै बाम एक ठाम । एउटै लक्ष्य, उद्देश्य बोकेका पार्टीहरुलाई फरक फरक ठाउँमा पाउँदा र भोट हाल्दा एउटै कम्युनिष्ट बन भनेर दवाव सृजना गर्दै आएका थिए । यसले गर्दा आम नेता कार्यकर्तामा यो एकताले उत्साह नै पैदा गरेको छ । कम्युनिष्ट विचार मान्ने जनताहरुमा झन ठूलो उत्साह र आशा जागेको छ ।
योे वस्तुगत परिस्थिति र जनताको मागको आधारमा नेताहरुले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो । हिजो रुसमा वेल्सिविक र मेन्सिविकहरुमा नि केहि राजनीतिक र सैद्धान्तिक भिन्नताहरु थिए तर लेनिनले जनताको चाहना भन्दै पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो । हिजो दुवै पार्टी फरक फरक आन्दोलन, पृष्ठभूमी, दर्शन र विचारवाटवाट प्रशिक्षित र सहभागी भएर आएका छन । यसैगरी हिजो दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरु दुश्मनी पनि गरिएको हो । तर, हिजो मलाई के भएको थियो भन्दा देशको आवश्यकता के छ रु भन्ने आधारवाट हे¥याँै भने एकताको महत्व र आवश्यकतालाई आमा जनसमुदाय र कार्यकर्ताले बुझन जरुरी छ ।
पार्टी एकतााले नेपाली समाज र राजनीतिमा दीर्घकालिन रुपमा के फाइदा गर्छ ?
विचारधारात्मक रुपमा हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा गरेका छौं । हाम्रा विचारमा केही भिन्नता अवश्य छन् । यी मतभिन्नतालाई एकता अघि र पछिसम्म पनि छलफल र बहस गरेर विचार, कार्यक्रम र कार्यनीति एउटै बनाएर हल होला जे भए पनि हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने नै हो । यसमा दुई दलबीच खासै धेरै अन्तर छैन ।
झापा आन्दोलनको विरासत बोकेको एमाले र जनयुद्धको एउटा महान अभियानवाट अघि बढेका माओवादी ०६२÷०६३ पछि सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा नजिक हुँदै गएका हाँै । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले सशस्त्र क्रान्तिद्धारा नेपालको जनवादी क्रान्ति मूलभूत रुपले सम्पन्न भएको हुँदा बाँकी कार्यभार पूरा गर्न समाजवाद तर्फ जाने निर्णय ग¥यो भने एमालेको नवाँै महाधिवेशनले आजको जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादको तयारी गर्ने नीति पास ग¥यो ।
यसरी दुवै पार्टी हिजो भन्दै आएको नेपाल अव अर्धसामन्ति र अर्ध औपनिवेशिक रहेन । जनवादी क्रान्तिका मूलभूत कार्यसम्पन्न भई समाजवादको तयारी गर्ने नीति पास भाएपछि एकताको आधार सैद्धान्तिक रुपमा पनि बलियो बनायो । यी दुवै पार्टीले आ–आफ्ना सिद्धान्तको नामकरण बेग्ला–बेग्लै गरे पनि कार्यभार भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु रहेको छ । यो एकताले नेपाली राजनीति र समाजमा दीर्घकालिन रुपमा समाजवादको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
पार्टी एकताका राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारहरु के हुन ?
दशवर्षे जनयुद्ध र उन्नाईस दिने जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको कार्यदीशा निर्माण गर्ने, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने, मालेमावादका सार्वभौम सिद्धान्तको आत्मसात गर्ने र आशन्न निर्वाचनमा ६०\_४० प्रतिसतले साझा उम्मेद्वार उठाउने विषय नै पार्टी एकताका आधारहरु हुन् ।
जातीय विभेद र छुवाछूत गर्ने पण्डितधारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने – पण्डित दिनबन्धु पोख्रेल
जुन धर्मले विभेद गर्छ त्यही धर्म मान्दै जातीय मुक्ति खोज्नु दलितहरूको मूर्खता हो -सिबि गहतराज
जातीय विभेद अन्त्यका निम्ति बाहुनकी छोरीले गरिन् जनवादी विबाह (भिडियाे)
इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका युवक आमालाई बचाउन पढाई छोडी काठमाडौमा भारी बोक्दै (भिडियाे)
राजनैतीक स्थायीत्वको लागी संबिधान परिमार्जन सभा नै अहीलेको अपरीहार्य आबश्यकता होः राणा(भिडीयो)